सबै व्यवसाय स्थानीय छ Martech Zone
सबै व्यवसाय स्थानीय छ
सोमबार, अप्रिल 18, 2011 बुधबार, अक्टोबर 16, 2013 Douglas Karr
तपाईंले मलाई सही सुन्नुभयो ... सबै व्यवसाय स्थानीय छ। म बहस गर्दैछु कि तपाईंको व्यवसायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आकर्षित गर्दछ। म केवल यो तथ्य बहस गर्दैछु कि धेरै व्यवसायहरू लेबल हुनबाट जोगिन प्रयास गर्छन् as स्थानीय - जे भए पनि यसले वास्तवमै उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई उनीहरूको भौगोलिक स्थान वा स्थानहरूको प्रचार गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। यो हाम्रो लागि निर्मित जस्तै बलियो म्यापि applications अनुप्रयोगहरूको माध्यमबाट होस् जंगली चराहरू असीमित, वा केवल क्लाइन्टहरूलाई उनीहरूको फोन नम्बर र सडक ठेगानाहरू सूचीबद्ध गर्न साइटको प्रत्येक पृष्ठमा उनीहरूको साइटको प्रत्येक पृष्ठमा सूचीबद्ध गर्न प्रोत्साहित गर्दै लाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू.
हरेक व्यवसाय कतै चल्छ ... हाम्रो शहर इंडियानापोलिस हो। हामीले डाउनटाउन छनौट गर्नुभयो जसले गर्दा यसमा अलि बढी मेट्रोको अनुभूति भयो र यो राज्यको राजधानी र केन्द्रित इन्डियानापोलिसमा स्थापित वाणिज्य र व्यवसायहरूको केन्द्रसँग जोडिएको थियो। अचम्मको कुरा, त्यो त्यस्तो होइन जहाँ हाम्रा ग्राहकहरू छन्। हामी हाल युरोपभर, भारतमा, क्यानडामा र माथि र तल पश्चिम र पूर्वी तटहरूमा काम गर्दैछौं।
हामी किन हाम्रो साइटमा हाम्रो ठेगाना प्रचार गर्छौं? किनभने मानिसहरूलाई तपाईं आफू कहाँ हुनुहुन्छ थाहा दिनु उनीहरूबाट विश्वास निर्माणको लागि एक उत्तम चरण हो। अदृश्य ब्रान्डहरूका अदृश्य कम्पनीहरूमा अदृश्य कर्मचारीहरू उनीहरूको दर्शकहरूको साथ विश्वसनीयता निर्माण गर्न अझ गाह्रो समय हुन्छ। के तपाईं ट्र्याक गर्न नसक्ने कम्पनीसँग धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? म गर्दिन! त्यहाँ केहि प्रमाणहरू पनि छन् जुन सर्च ईन्जिनहरूले जान्न चाहन्छ कि तपाईंले आफूलाई क्षेत्रीय रूपमा पनि स्थापना गर्नुभयो - साईटहरू छिटो बनाउने जब तिनीहरू फोन नम्बर र ठेगानाहरू प्रदान गर्दछन्।
हामीले रेडियो कार्यक्रम चलायौं स्थानीय एसईओ यो हप्ता र यो उत्कृष्ट भयो। हाम्रो एक श्रोताले हामीलाई मा एक महान उपकरण औंल्याए गेटलिस्टेड। हामीले केहि अन्य साइटहरूको साथ दर्ता गर्न केहि कार्यहरू पाएका छौं। मलाई लाग्छ कि हामी वेबको सर्वश्रेष्ठ पास गर्नेछौं - तर अरूमा निश्चित रूपमा दर्ता गर्नेछौं। तपाईं सूचीबद्ध हुनुहुन्छ?
नोट: अर्को पाठकले हामीलाई यस बारे बताउन लेखे विश्वव्यापी व्यापार लिस्टिंग (सम्बद्ध लिंक), एक सेवा जसले तपाईंको व्यापार सुनिश्चित गर्दछ प्रत्येक स्थान-आधारित निर्देशिका संग पंजीकृत छ। यदि तपाईंको व्यवसायलाई क्षेत्रीय रूपमा फेला पार्न सकिन्न भने, तपाईंलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फेला पार्न समस्या हुन सक्छ!
टैग: क्रिस baggottईमेल मार्केटिंग पुस्तककुञ्जी प्रदर्शन संकेतकहरूचलचित्रवालेट प्रबन्धकYahoo
भिडियो: नवीनता समस्या समाधान गरेर प्राप्त गरियो
हफिंगटनको साथ हफ